IDuteronomi 12 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Yiyo le imimiselo namasiko, enowagcina ukuba niwenze ezweni elo, akunika lona uYehova uThixouThixo wooyihlo, ukuba ulime yonke imihla enidla ngayo ubomiubomi emhlabeni.
2 Zichitheni kuphele zonke iindawoiindawo, apho iintlangaiintlanga enizigqogqayo zabakhonzela khona oothixo bazo, ezintabeni eziphakamileyo, nasezindulini, naphantsi kwemithi yonke eluhlaza;
3 nizidilize izibingeleloizibingelelo zazo, niziqhekeze izimiso zazo zamatye, nibatshise ngomlilo ooAshera bazo, niyixakaxe imifanekisoimifanekiso eqingqiweyo yoothixo bazo, nilicime igamaigama lazo kule ndawo.
4 Ize ke ningenjenjalo kuYehova uThixouThixo wenu.
5 Endaweni leyo aya kuyinyula uYehova uThixouThixo wenu ezizweni zenu zonke, ukuba alimise khona igamaigama lakhe, ukuba ahlale khona, ize niquqele khona, niye khona.
7 nidle khona phambi koYehova uThixouThixo wenu, nivuye entweni yonke enisa isandlaisandla senu kuyo, nina nezindlu zenu, akusikeleleyo kuyo uYehova uThixouThixo wakho.
9 kuba okwangoku anikangeni ekuphumleni oko, naselifeni elo, aninikayo uYehova uThixouThixo wenu.
10 Ke noyiwela iYordan, nihlale ezweni elo, uYehova uThixouThixo wenu aya kunidlisa ilifa kulo, aniphumze ezintshabeni zenu zonke ngeenxa zonke, nihlale nikholosile.
11 Kothi ke kubekho indawoindawo aya kuyinyula uYehova uThixouThixo wenu, alihlalise khona igamaigama lakhe, nizizise khona izinto zonke endiniwisela umthethoumthetho ngazo; amadini enu anyukayo, nemibingelelo yenu, nezishumi zenu, nomrhumo wesandla senu, nezibhambathiso zenu zonke ezinyuliweyo, enibhambathisa ngazo kuYehova;
12 nivuye phambi koYehova uThixouThixo wenu, nina noonyana benu, neentombi zenu, nezicaka zenu, nezicakakazi zenu, nomLevi osemasangweni enu, ngokuba akanasabelo nalifa nani.
14 Ke endaweni leyo aya kuyinyula uYehova, kwesinye sezizwe sakowenu, wowanyusa khona amadini akho anyukayo, ukwenze khona konke endikuwisela umthethoumthetho ngako.
15 Noko ke, ngokunqwena konke komphefumlo wakho, ungaxhela uyidle inyamainyama, ngokwentsikelelo kaYehova uThixouThixo wakho akunikileyo, emasangweni akho onke; oyinqambi nohlambulukileyo bangayidla into enjengebhadi nenjengexhama.
17 Akunakusidlela emasangweni akho isishumiisishumi sengqolowa yakho, nesewayini yakho entsha, neseoli yakho, namazibulo eenkomo zakho nawempahla yakho emfutshane, nezibhambathiso zakho zonke obhambathisa ngazo, nemibingelelo yakho yokuqhutywa yintliziyo, nomrhumo wesandla sakho.
18 Zona uze uzidlele phambi koYehova uThixouThixo wakho, endaweni leyo aya kuyinyula uYehova uThixouThixo wakho, wena ke, nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nomLevi osemasangweni akho; uvuye phambi koYehova uThixouThixo wakho ezintweni zonke osa isandlaisandla sakho kuzo.
20 Xa athe uYehova uThixouThixo wakho wawenza banzi umdaumda wakho, njengoko abethethe ngako kuwe, uthi, Ndiya kudla inyamainyama, ngokuba umphefumloumphefumlo wakho unqwenela ukuyidla inyamainyama: ungayidla inyamainyama ngokungqwena konke komphefumlo wakho.
21 Xa ithe yamgama kuwe indawoindawo leyo, aya kuyinyula uYehova uThixouThixo wakho, ukuba alimise kuyo igamaigama lakhe: woxhela ezinkomeni zakho, nasempahleni yakho emfutshane, akunikileyo uYehova, njengoko ndakuwisela umthethoumthetho ngako, udle emasangweni akho ngokunqwena konke komphefumlo wakho.
23 Kodwa qina ungalidli igaziigazi, kuba igaziigazi ngumphefumlo; uze ungawudli ke umphefumloumphefumlo kunye nenyama.
25 Uze ungalidli; ukuze kulunge kuwe, nakoonyana bakho emvaemva kwakho, xa uthe wakwenza okuthe tye emehlweni kaYehova.
27 wenze amadini akho anyukayo, inyamainyama negazi, esibingelelweni sikaYehova uThixouThixo wakho; igaziigazi lemibingelelo yakho uligalele esibingelelweni sikaYehova uThixouThixo wakho, uyidle inyamainyama yona.
28 GcinaGcina uwaphulaphule la mazwi onke, ndikuwisela umthethoumthetho ngawo, ukuze kulunge kuwe nakoonyana bakho emvaemva kwakho, kude kuse ephakadeni, xa uthe wenza okulungileyo nokuthe tye emehlweni kaYehova uThixouThixo wakho.
29 Xa athe uYehova uThixouThixo wakho wazinqumla phambi kwakho iintlangaiintlanga, apho uya kuzigqogqa khona, wazigqogqa ke, wahlala ezweni lazo:
31 Uze ungenjenjalo kuYehova uThixouThixo wakho; kuba yonke into elisikizi kuYehova, ayithiyileyo, ziyenzile koothixo bazo; ngokuba kwanoonyana bazo neentombi zazo zizitshise emlilweni koothixo bazo.
32 Into yonke endisukuba ndiniwisele umthethoumthetho ngayo, ize nigcine ukuyenza; uze ungongezi kuyo unganciphisi nto.
Arcana Coelestia 796, 1001, 1045, 1947, 2009, 2187, 2722, ...2838, 3727, 3813, 4735, 6674, 8680, 9348, 9393, 9481, 10033, 10040, 10643
True Christian Religion 264, 298, 706
Apocalypse Explained 102, 329, 391, 405, 617, 1045, 1082
IEksodus 23:24, 34:24
ILevitikus 3:17, 17:3, 4, 11, 18:3, 21, 30, 20:2, 23:40, 25:18, 19
IDuteronomi 3:18, 5:1, 6:1, 7:5, 16, 10:9, 11:16, 12:5, 11, 14, 18, 14:5, 23, 26, 27, 29, 15:19, 20, 22, 23, 16:2, 6, 7, 11, 14, 15, 17:8, 18:6, 9, 10, 19:1, 20:18, 21:9, 26:2, 11, 27:7, 31:11, 33:28
Yoshuwa 9:27, 11:23, 14:1, 21:43, 22:11, 16, 29
1 Samuweli 1:21
1 Kumkani 8:29, 12:27, 14:23
2 Kumkani 3:27, 16:10, 17:15, 18:22
EyokuQala yeziKronike 22:1, 18, 29:22
2 yeziKronike 7:12, 14:2, 33:2
UNehemiya 1:9, 8:9
IiNdumiso 66:13, 78:58, 106:35, 116:17
NguYeremiya 2:20, 7:12, 21, 17:2, 31:2
UHezekile 11:12, 38:11, 44:3
Izenzo zaBapostile 13:19